အဖြူရောင်အိမ်လေးတစ်လုံး: အဖြေမတူခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ
... 4:09:00 PM
ကျွန်တော့်ဆီမှာ ၁ ဦးဖို့ မလိုပါဘူးဗျ နောက်ရက်မှ လာလည်း တစ်ရနိုင်တယ် ဟာဟ
22 July 2009 at 8:00 PM
ဟူး...တော်သေးတာပေါ့ကိုမင်းအိမ်ရယ်... ငွေနောက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ အမြင်လွဲမှုတွေ၊ အထင်လွဲမှုတွေကို ဒီပို့စ်လေးက ဖယ်ရှားပေးလိုက်နိုင်တာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...။
22 July 2009 at 8:12 PM
နောင့် ကတော့ မီမီ့ ကိုထောက်ခံတယ်.... သူမိသားစု အတွက် အကောင်းဆုံးကို လုပ်သွားနိုင်တာပဲ။ ဒါပေမယ့်...ပထမ အချက်... သူ ဦးမိုးမြင့်ယံနဲ့လက်ထပ်ပြီးတာတောင် စင်္ကာပူလိုက်နေသေးတာပဲ... ဘာလို့ နဒ္ဒနဲ့ လက်ထပ်ပြီး လန်ဒန်မလိုက်တာလဲ.... မိသားစုနဲ့ ခွှဲနေရမှာချင်းတူတူလေ.... လန်ဒန် ကထောက်ပံ့တာနဲ့ စင်္ကာပူက ထောက်ပံ့တာ တူတူပါပဲ....။ ဒါပေမယ့် လန်ဒန် မှာ နေပြီး ထောက်ပံ့လို့မရဘူး ဆိုရင်တော့ (ဦးမိုးမြင့်ယံက ပိုချမ်းသာ) လို့လဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေ့ါ..။
22 July 2009 at 9:22 PM
အရင်တစ်ပုဒ်လဲ ဖတ်ပါတယ်.. မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး
ကျမကတော့ လူတွေ တော်တော်များများက ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်စီနဲ့လို့ပဲ ယူဆတယ်၊ အဲ့ဒါကြောင့် ဘာမှ ဝင်မရေးခဲ့တာပါ၊
မီမီ မှားတယ်လို့ မမြင်ပါဘူး၊ မှန်လားဆိုတာတော့ ... တစ်ယောက်ချင်းမှ မတူတာနော်၊ သူလိုချင်တာကို သူရွေးခွင့်ရခဲ့ရင် သူ့အတွက် လမ်းမှန်လို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့၊
သူ စိတ်ချမ်းသာပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်
ကိုမင်းအိမ်ဖြူ ရေ ပထမပို့စ်မှာ တံလျှပ်ကို ရေထင်မိတယ် ဆိုပြီး သုံးလိုက်မိတာ တကယ်တော့ မီမီ ကို အပြစ်တင်တဲ့ သဘောမျိုးနဲ့ သုံးချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အသုံး မတတ်လို့ ကိုမင်းအိမ်ဖြူ ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် နဲ့ ကွာသွားပုံပဲ။ ကျွန်မ အနေနဲ့ မီမီလုပ်တာ မှားတယ် မှန်တယ်လို့ ပထမပို့စ် ကတည်းက မတွေးမိပါဘူး။ လူတွေ ဟာ ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေနဲ့ လိုက်လျော်ညီထွေ အောင် နေပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံး လုပ်နေကြတာပါပဲ။ ကိုမင်းအိမ်ဖြူရဲ့ ဆိုလိုရင်းလေးကို ဖျက်ဆီးမိသလို ဖြစ်သွားလို့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။
22 July 2009 at 10:21 PM
အစတည်းက သူ့ ရွေးချယ်မှုကို အထင်မမှားခဲ့လည်း အခုလို ဖတ်ရတော့လည်း စိတ်မကောင်းဘူး။
"ညိုပြာပြာ လတာပြင့် ခြေရင်း။
လှိုင်းတက်ရ ဗေဒါတက်၊ လှိုင်းသက်ရာဆင်း။"
နောက်ဆုံးမှာတော့ မဗေဒါက အပြုံးမပျက်ပန်းပန်လျှက်ပါ.
လာရောက်ဖတ်ရှုပေးသူအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ် ၊၊
ကျွန်တော့်အနေနဲ့လည်း မှားတယ်မှန်တယ်၇ယ်လို့ ဘယ်လို မှတ်ချက်မျိုးမှ မပေးချင်ပါဘူး
ဒါ့ကြောင့်လည်း ကံတရားကိုပဲ အပြစ်ဆိုမိပါတယ်
နောက်အထူးအနေနဲ့ မေးခွန်းလေးထပ်ထွက်လာတဲ့ မမေဇင်အတွက် ကျေးဇူးပြုပြီး သေချာစွာပြန်ဖတ်ပေး ပါလို့ပဲ ဆိုပါရစေ ၊၊ နန္ဒတာဝန်ယူနိုင်တာက မီမီတစ် ယောက်တည်းပါ ၊၊ ဦးမိုးမြင့်ယံကတော့ မြန်မာပြည် မှာတည်းက တစ်မိသားစုလုံးကိုတာဝန်ယူနိုင်သလို မီမီ ဆန္ဒတွေကိုလည်း လိုက်လျောဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လို့ပါ ငွေကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူး ၊ အကြင်နာတရားလည်း ပါပါတယ် ၊၊ လူကြီးလည်းဆန်တာကိုး ၊၊
but i sure one thing!!
she is very clever!!!
i dont wanna say she s wrong but money cant create everything ...especially ...u cant buy true love with moeny.That s what i believe but ko min ein u can write very well.Its very impressive..wanna read more..
8 September 2009 at 2:13 AM